Paul's 1st Letter to Timothy – 2hove
musha / Bhaibheri / mutsamba / Paul's 1st Letter to Timothy
1:1 Paul, mupostori waJesu Kristu nesimba kwaMwari Muponesi wedu naKristu Jesu tariro yedu,
1:2 Timoti, mwanakomana anodiwa mukutenda. nyasha, tsitsi, uye rugare, kuna Mwari Baba nokuna Kristu Jesu Ishe wedu.
1:3 Zvino ndakakumbira kuti varambe paEfeso, ini kuMasedhonia, kuitira kuti imi aizotaura zvakasimba pamusoro vamwe vaya vave vachidzidzisa yakasiyana nzira,
1:4 vaya vanenge kuteerera ngano nenhoroondo dzamazita emadzibaba. Izvi zvazvino mibvunzo sokunge kupfuura pakusimbisa kuti Mwari, kuri murutendo.
1:5 Zvino chinovavarirwa nomurairo ndirwo rudo runobva pamoyo wakachena, uye hana yakanaka, uye rutendo rwusinganyepedzeri.
1:6 vamwe, achidzungaira kure izvi, vakatotsauswa kuti chinhu Kutaurisa,
1:7 vachishuva kuva vadzidzisi vemurairo, asi kunzwisisa kunyange zvinhu ivo pachavo vari vachiti, kana zvavari vachiti izvi.
1:8 Asi tinoziva kuti murairo wakanaka, kana mumwe anoita kushandiswa zvakanaka.
1:9 Kuziva izvi, kuti murayiro hauna kuisa panzvimbo akarurama, asi nekuda kwavasakarurama uye kusateerera, nokuti akaipa uye vatadzi, vakaipa uye akasvibiswa, vaya vanoita patricide, matricide, kana kuuraya,
1:10 mhombwe, nokuti vanhurume vanorara nevarume, nokuti vanoba, nokuti varevi venhema, nokuti nhema, uye chero chimwe chinhu chinopesana nedzidziso mhenyu,
1:11 riri maererano Gospel kubwinya raMwari akaropafadzwa, Evhangeri iyo yave kwandakapiwa.
1:12 Ndinovonga iye uyo akandisimbisa, Kristu Jesu Ishe wedu, nekuti iye kuti ndakatendeka, ini achiisa ushumiri,
1:13 kunyange yakapfuura ndaiva munhu anomhura, uye mutambudzi, uye yokusaremekedza. Asi ndakabva ndawana nyasha dzaMwari. Nokuti ndakanga kuita nokusaziva, mukusatenda.
1:14 Uye saka nyasha dzaIshe wedu dzakawedzeresa zvikuru, nokutenda norudo zviri muna Kristu Jesu.
1:15 Zviri rakatendeka, uye akakodzera nokugamuchirwa vose, kuti Kristu Jesu akauya munyika muno kuunza ruponeso kuvatadzi, vandiri pakati pavo pakutanga.
1:16 Asi zvakanga nokuda kwaizvozvi kuti ndakawana tsitsi, saka kuti mandiri sezvo pakutanga, Kristu Jesu aratidze mwoyo murefu zvose, nokuti kurairira avo vachatenda kwaari, paupenyu hwusingaperi.
1:17 Naizvozvo, Mambo narinhi, kune usingafi, asingaoneki, roga Mwari, ngaave nokukudzwa nokubwinya nokusingaperi-peri. Amen.
1:18 murayiro uyu ndinokumikidza kwauri, mwanakomana wangu Timothy, maererano navaprofita asati iwe: kuti iwe kushumira pakati pavo somurwi ari hondo yakanaka,
1:19 unobatisisa kutenda uye nehana yakanaka, vaya, nokuramba izvi, vakaita kwaparara rutendo.
1:20 Pakati izvi ndiHimenio naArekizanda, vandakakumikidza muruoko Satani, kuitira kuti vadzidze kusanyomba.
2:1 Uye saka Ndinokukumbirai, kutanga kwazvose, kuti kuteterera, minyengetero, zvikumbiro, uye kuvonga vanhu vose,
2:2 madzimambo, uye vose vari dzakakwirira, kuitira kuti ringatungamirira akanyarara uye wakagadzikana upenyu pauMwari hwose uye dzakachena.
2:3 Nekuti izvi zvakanaka uye zvinogamuchirwa pamberi paMwari Muponesi wedu,
2:4 uyo anoda kuti vanhu vose vaponeswe uye kuti tisvike pakuva mukugamuchira chokwadi.
2:5 Nokuti kuna Mwari mumwe, nomurevereri mumwe Mwari uye navanhu, munhu Kristu Jesu,
2:6 uyo akazvipa kuva rudzikunuro vose, seuchapupu racho nguva yakakodzera.
2:7 Yechipupuriro ichi, Ndakagadzwa kuva muparidzi nemuapositori, (Ndinotaura chokwadi, handirevi nhema) somudzidzisi kuvaHedheni, mukutenda uye nechokwadi.
2:8 saka, Ndinoda vanhu vanyengetere panzvimbo dzose, vachisimudza maoko akachena, pasina hasha kana kukakavadzana.
2:9 Saizvozvowo wo, Vakadzi vanofanira kupfeka zvakakodzera, aishongedza pamwe compunction uye kuzvidzora pachavo, uye kwete Vakaruka bvudzi, kana goridhe, kana maparera, kana zvipfeko dzinodhura,
2:10 asi nenzira yakakodzera kuti vakadzi vari vanoti vanoshumira achishandisa nemabasa akanaka.
2:11 Mukadzi ngaadzidze mukunyarara nekuzviisa pasi zvose.
2:12 Nokuti Handitenderi mukadzi kuti adzidzise, kana kuva nesimba pamusoro murume, asi kuti anyarare.
2:13 Nokuti Adhamu akatanga kuumbwa, ipapo Eve.
2:14 NaAdhamu haana anyengedza, asi mukadzi, ndapera anyengedza, akanga kudarika.
2:15 Asi iye achaponeswa nokuda kubereka vana, kana iye akaramba ari mukutenda nomurudo, uye muhutsvene achiperekedzwa kuzvidzora.
3:1 Zviri rakatendeka: kana munhu anoda remabhishopu rakatanga, unoshuva basa rakanaka.
3:2 saka, zvakafanira kuti bhishopi yaisagona kuzvidzwa, murume wemukadzi umwe, svinurai, akangwara, nyasha, wakachena, va nemutsa, Mudzidzisi,
3:3 kwete chidhakwa, kwete kuvamanikidza asi ikadziviswa, usina gakava, kwete pakuda;
3:4 asi munhu anotungamirira imba yake zvakanaka, une vana vari pasi rose dzakachena.
3:5 Nokuti kana munhu asingazivi sei kutungamirira imba yake, sei achatarisira Chechi yaMwari?
3:6 Haafaniri kuva mupinduki mutsva, zvimwe, Vachinzi anofara nokudada, akawa pasi mutongo radhiabhori.
3:7 Uye zvakafanira kuti iye kuti kupupurirwa zvakanaka nevari kunze, kuti arege kuwira rishorwe nemumusungo wadhiabhorosi.
3:8 Saizvozvowo, madhikoni anofanira kuva akachena, vasina manzwi maviri, vasingadi waini zhinji, vaisatevera kusvibiswa purofiti,
3:9 unobatisisa chakavanzika cherutendo vaine hana yakachena.
3:10 Uye izvi zvinofanira kutanga nekusimba, uye ipapo dzikushumire, kuva pasina mhosva.
3:11 Saizvozvowo, Vakadzi vanofanira kuva vakachena, kwete vacheri, svinurai, vakatendeka pazvose.
3:12 Madhikoni vanofanira kuva murume ano mukadzi mumwe, varume vanotungamirira vana vavo nedzimba dzavo zvakanaka.
3:13 Nokuti avo vakashumira zvakanaka Muchawana vanozviwanira chinzvimbo chakanaka, uye chivimbo kukuru parutendo rwuri muna Kristu Jesu.
3:14 Ndiri kunyora zvinhu izvi kwamuri, vane tariro kuti ndichauya kwamuri nokukurumidza.
3:15 asi, kana ndikanonoka, unofanira kuziva mapiro zvakafanira kuzvibata muimba yaMwari, inova Chechi yaMwari mupenyu, mbiru hwaro chokwadi.
3:16 Uye zviri pachena kwazvo, Chakavanzika ichi vatsvene, iyo wakaratidzwa panyama, rakanga akaruramiswa noMweya, iyo akazviratidza Angels, iro rave akaparidzwa kuvahedheni, iro vakatenda munyika, iro rave akakwidzwa mukubwinya.
4:1 Zvino Mweya zvakajeka akati kuti, pakupedzisira nguva, vamwe vanhu uchabva pakutenda, Kuteerera nemidzimu kukanganisa uye dzidziso yakaipa,
4:2 kutaura nhema kunyengera, uye wakati hana dzavo dzakapiswa,
4:3 unorambidza kuroorana, kurega zvokudya, izvo Mwari akasika kugamuchirwa nokuonga akatendeka uye nevaya vainzwisisa chokwadi.
4:4 Nokuti chisikwa chaMwari zvose zvakanaka, uye hapana chinofanira kuraswa iro nekuvonga;
4:5 nokuti vatsvene neShoko raMwari uye nokunyengetera.
4:6 By unoda zvinhu izvi hama, uchava mushumiri waKristu Jesu akanaka, wakafundwa nemashoko okutenda, uye nedzidziso yakanaka yawakatevera yakasimbiswa.
4:7 Asi usabatwa mano ngano yekare vakadzi. Uye kushandisa pachako kuti mberi pauMwari.
4:8 Nokuti muviri wemuviri zvishoma kubatsira. Asi uMwari anobatsira zvose, akabata chivimbiso cheupenyu, mune ino uye mune ramangwana.
4:9 Ishoko rakatendeka uye rinofanira kugamuchirwa zvizere.
4:10 Nekuda kwechikonzero ichi isu basa uye tiri kufungirwa zvakaipa: nekuti tinovimba naMwari mupenyu, unova Muponesi wevanhu vose, kupfuura kunyanya vakatendeka.
4:11 Vadzidzise uye udzidzise zvinhu izvi.
4:12 Ngakurege kuva nomunhu anokuzvidza hwako, asi kuva muenzaniso pakati vakatendeka mushoko, mumuitiro, parudo, mukutenda, mu dzakachena.
4:13 Kusvikira ndasvika, teerera kuverenga, kukereke, uye kuti dzidziso.
4:14 Regai kuva nechido hanya nyasha riri mukati mako, chakapiwa kubudikidza uprofita kwamuri, pamwechete nokuiswa kwemaoko youpristi.
4:15 Fungisisa zvinhu izvi, kuti kufambira mberi kwako kuonekwe kune vose.
4:16 Zvichenjererei iwe nedzidziso. Teverai zvinhu. Mukuita kudaro, uchazviponesa iwe nevaya vanokuteerera.
5:1 Haufaniri kutuka mutana, asi kumuteterera, sounotaura nababa vako; pamwe majaya, sezvinoita hama;
5:2 pamwe yekare vakadzi, kufanana vanamai; vakadzi vaduku, vose dzakachena, kufanana hanzvadzi.
5:3 Kudza avo chirikadzi dziri chirikadzi vechokwadi.
5:4 Asi kana chero chirikadzi ipi ine vana kana vazukuru, kumurega kutanga kudzidza ndowokuti wake, uye kuzadzisa, mukudzosa, kwake vaitire vabereki vake; nokuti izvi zvinofadza pamberi paMwari.
5:5 Asi iye ane chirikadzi uye achishaiwa, regai tariro yake muna Mwari, uye ngaave mukadzi nokukurumidza pamikumbiro neminyengetero, usiku nemasikati.
5:6 Nokuti iye ndiye mupenyu pakuchiva kwakafa, richirarama.
5:7 Uye kupa mirayiridzo iyi, kuti vave kudarika kuzvidzwa.
5:8 Asi kana munhu asina hanya kwake, uye kunyanya avo veimba yake, waramba kutenda, uye ndiye akaipa kukunda asingatendi.
5:9 Regai chirikadzi kusarudzwa ndiani hapana asingasviki makumi matanhatu nemakore, uyo aiva mudzimai aiva nomurume mumwe chete,
5:10 ane uchapupu mabasa akanaka wake: kana iye vakadzidza vana, kana akagovera mutsa, kana yaishambidza tsoka dzevatsvene, kana kuzoshumirwa avo vanotambura kutambudzika, kana vakatevera chero basa rakanaka mhando.
5:11 Asi nzvenga chirikadzi duku. Nokuti kamwe vakaita kaiva Kristu, vachava kuda kuroorwa,
5:12 zvichiguma kutongwa, nekuti havana kuteerera ndiro rine chokwadi nokutenda.
5:13 Uye panguva iyoyo zvakare simbe, vanodzidza kuenda paimba neimba, kuva kwete simbe chete, asiwo aitaurisa uye kuziva, achitaura zvinhu havanei nazvo.
5:14 saka, Ndinoda vakadzi vaduku kuroorwa, kuti vaberekane vana, kuva vanamai emhuri, kugovera hapana akagadzirira mukana muvengi kutaura zvakaipa.
5:15 Nokuti vamwe wakatozviitirwa vakadzokera Satani.
5:16 Kana pakati vakatendeka vane chirikadzi, ngaauye muishumire uye kwete mutoro Kereke, kuti pangava zvakakwana vaya vari chirikadzi vechokwadi.
5:17 Vapiristi vanotungamirira zvakanaka kunzi vakafanira kaviri kukudzwa, kunyanya avo vanobata pashoko nepadzidziso.
5:18 For Rugwaro runoti: "Usasunga muromo wenzombe nzombe sezvazvakanyorwa ichipura zviyo,"uye, "Mushandi akafanirwa nomubayiro wake."
5:19 Musava kubvuma mhosva mupristi, kunze pasi nezvapupu zviviri kana zvitatu.
5:20 Tsiura vatadzi pamberi vose, kuti vamwe vave kutya.
5:21 Ndinokurairisa kwazvo pamberi paMwari naKristu Jesu uye napamberi pavatumwa vakasanangurwa, kuti unofanira kuchengeta zvinhu izvi pasina kufanotonga, kuita chinhu izvo zvinoratidza chizivano kune divi.
5:22 Haufaniri kukurumidza kuisa maoko pamusoro munhu, kana unofanira kutora chikamu muzvivi kunze. Zvichengete wakachena.
5:23 Rega kuramba kunwa mvura chete, asi kushandisa waini shoma, nokuda kwomudumbu kwenyu hwekazhinji.
5:24 Zvivi zvevamwe vanhu vave pachena, dzapfuura kuti mutongo, asi kune vamwe zvinozarurwa Papera.
5:25 Saizvozvowo, wo, mabasa akanaka pachena, asi kunyange kana vasina, havagoni kuramba kuvanzika.
6:1 Ani vari varanda pasi pejoko, Ngavatsvake funga vatenzi vavo vakakodzera kukudzwa ose, zvimwe zita uye nedzidziso kwaIshe kumhurwa.
6:2 Asi vaya vane vanatenzi vanotenda, ngavarege vangamuzvidza nokuti ihama, asi zvikuru kuvashumira zvose zvikuru nokuti vanotenda uye vanodikamwa, Vatori vechikamu chimwe chete
sevhisi. Dzidzisa zvinhu izvi ukurudzire.
6:3 Kana munhu achidzidzisa zvakasiyana, uye asingauyi kubvuma mashoko aIshe wedu Jesu Kristu ruzha, uye kuti dzidziso zviri maererano pauMwari,
6:4 ipapo iye vanamanyawi, achiziva chinhu, asi unokusuwa pakati mibvunzo uye kukakavara mashoko. Kubva izvi simuka shanje, kukakavara, kusakoshesa Mwari, kufungidzira kwakaipa:
6:5 kukonana varume vane pfungwa dzakaora uye kunyimwa chokwadi, uyo funga purofiti kuva vatsvene.
6:6 Asi uMwari nokugutsikana inzira inopfumisa kwazvo.
6:7 Nokuti isu kuvuya nechinhu panyika, uye hapana mubvunzo kuti tinogona kutora hapana kure.
6:8 asi, tine zvokudya uye zvimwe mhando kufukidza, tinofanira kugutsikana izvi.
6:9 Nokuti vaya vanoda kupfuma vanowira mumuedzo uye kupinda mumusungo wadhiabhori uye kupinda asingabatsiri uye zvinokuvadza zvido zhinji, iyo nyudza vanhu mukuparadzwa uye mukuparadzwa.
6:10 Nokuti chido ndiwo mudzi zvose zvakaipa. vamwe vanhu, nzara saizvozvi, vakatsauka kubva pakutenda uye vakazvibaya muna kusuwa dzakawanda nokukundwazve.
6:11 Asi iwe, Haiwa, munhu waMwari, tiza zvinhu izvi, uye zvechokwadi nokutsvaka ruramisiro, uMwari, kutenda, mutsa, moyo murefu, unyoro.
6:12 Irwa kurwa kwakanaka kwerutendo. Musungei upenyu husingaperi kuna wakakuisai rinonzi, uye kuita yokutenda kwakanaka pamberi pezvapupu zvizhinji.
6:13 Ndinokupikirai, pamberi paMwari, uyo enlivens zvose zvinhu, uye pamberi Kristu Jesu, uyo akapa uchapupu ukabvuma kubvuma kwakanaka pasi Pondiyo Pirato,
6:14 kuchengeta murayiro, immaculately, irreproachably, kuna kudzoka kwaShe wedu Jesu Kristu.
6:15 Nokuti panguva yakafanira, anofanira kuzivisa oga wakaropafadzwa Power, Mambo wamadzimambo naIshe wamadzishe,
6:16 iye oga akabata kusafa, uye anogara ari sasvikika chiedza, uyo hakuna munhu akamboona, kana kunyange kugona kuona, kuti ani rukudzo nesimba kusingaperi. Amen.
6:17 Rayira vapfumi venyika ino kuti varege kuva mukuru nemafungiro, kana kuvimba nefuma, asi muna Mwari mupenyu, uyo anotipa zvose zvizhinji kuti tifare,
6:18 uye kuita zvakanaka, kupfuma pamabasa akanaka, kuti vape nyore, kugoverana,
6:19 kuungana vega pfuma nheyo yakanaka yenguva, kuitira kuti tiwane upenyu kwechokwadi.
6:20 Timothy, murindi chii chave yaiswa nemi, kudzivisa inzwi vanomhura novelties uye wokushora pfungwa, izvo nhema inonzi zivo.
6:21 vamwe, vachivimbisa izvi, vakaparara pakutenda. Nyasha ngadzive nemi. Amen.